Momba anay - Zhejiang Longstar Houseware Co., Ltd.
Zhejiang Longstar Houseware Co. Ltd.
Hifanome tanana amin'ireo mpanjifa manerantany ny orinasa hamoronana rahampitso tsaratsara kokoa.
Mandrakotra firenena sy faritra 20 mahery any Eropa, Amerika, Japon, Korea atsimo, Rosia, Filipina, sns.
Iray amin'ireo orinasam-pitaovana maoderina mitarika amin'ny famokarana R&D sy kalitaon'ny vokatra
Omeo kojakoja tsara sy maharitra ao an-trano ary mamorona fiainam-pianakaviana maoderina tsara kokoa
Momba an'i Longstar
Zhejiang Longstar Houseware Co. Ltd dia natsangana tamin'ny taona 1996, aorian'ny fampandrosoana 20 taona dia lasa orinasa lehibe eo amin'ny sehatry ny indostria ao China izy io. Tamin'ny taona 2009, ny tobim-pamokarana Longstar ao Xianju dia napetraka, mahatratra 150 hektara miaraka amin'ny famatsiam-bola mitentina RMB 150 tapitrisa. Niakatra haingana ny varotra satria nivelatra ireo fantsom-pivarotana, ary mitohy hatrany ny fiakarana avo.
Ny vokatra Longstar dia miditra amin'ny fianakaviana sinoa amin'ny salan'isa indroa isan-tsegondra. Ny vokatr'ilay orinasa dia tsy vitan'ny fivarotana tsara eo amin'ny tsena anatiny, fa koa miparitaka any amin'ny firenena sy faritra 20 misy an'i Eropa, Amerika, Japan, Korea, Russia, Filipina. Vokatr'izany, ny vokatra avy amin'ny orinasa dia tian'ny mpanjifa anatiny sy ivelany. Amin'izao fotoana izao, ny vokarin'ny orinasa dia tafiditra ao anatin'ny sokajy 20 mihoatra ny 2000 unit.
Ny fahaizantsika sy ny traikefanay
Ny tambajotram-barotra ataon'ny orinasa dia manarona ireo tsangambato iraisampirenena KA toy ny Wal-Mart, Carrefour ary RT-MART ary koa ny fivarotana supermarket sasany toa ny CR Vanguard, Yonghui Superstore ary supermarket SG.
Tamin'ny 2016, Longstar dia nandany vola be tamin'ny fanafarana fitaovana fanaparitahana famokarana ho azy ny tavoahangy fantsona. Ny orinasa dia manolotra andiana fitaovana sy teknolojia fandrosoana mandroso toy ny milina fanapahana laser mandeha ho azy voalohany ao Shina, milina mpamantatra moloka ary vovoka- atrikasa hosodoko maimaim-poana. Ny tanjaky ny orinasa matanjaka dia manome antoka ny famokarana sy ny fahafaha-mamatsy vokatra, ary ankehitriny ny orinasa dia afaka mamokatra tavoahangy banga dimy tapitrisa isan-taona.
Ankoatr'izay, Longstar dia saika hitondra an'izao tontolo izao mitarika ABB manipulator, izay avo lenta kokoa noho ny vita tanana. Ny vokatra rehetra dia hatao eo ambanin'ny fenitra matihanina sy milamina kokoa.
Asa tanana avo lenta
Ny fantsom-pametahana rano manara-penitra avo lenta dia mampisaraka ny rano amin'ny alàlan'ny fametahana bolt amin'ny sisin'ny tavoahangy, ary mitahiry ny hafanana tanteraka. Mora ny mitondra sy misoroka ny famoahana rano. Ny fomba fiasa rehetra dia mifameno sy mifanan-kery ary mitazona ny hafanana tsara indrindra. Longstar dia manatsara ny tavoahangy maivana, izay ampiasain'ny fitoerany ao anatiny ny teknikan'ny fizotran'ny fihodinana, manify izy nefa tery. Mazava sy mora entina izy io, izay tsy mandre afa-tsy roa ampahatelon'ny tavoahangy banga fotsiny. Fa ny fitehirizana ny hafanana kosa dia mety haharitra kokoa noho ny mahazatra. afaka mankafy marina ny fiainanao maivana ianao.
Ny tavoahangy banga ao Longstar dia manolo-tena amin'ny endrika vaovao mampifangaro ny lamaody sy ny ilaina, ary mifantoka amin'ny endrika kanto miaraka amin'ny loko, ka mahatonga azy io ho tsara sy ho sariaka amin'ny tontolo iainana. Manana endrika vaovao izy ary mitazona mafana na mangatsiaka ny rano mba hahafahanao misotro madio. sy rano salama.Ho an'ireo tonga lafatra, ny orinasa dia mikendry hamokatra tavoahangy banga iray izay anao irery.